Huawei Nova 5 nwetara asambodo 3C na ụgwọ ngwa ngwa nke 40 watts | Gam akporosis
Nke ikpeazụ P30 Pro Huawei bịara na 40W ngwa ngwa na-ebu ihe ngwọta nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara. Mana teknụzụ ahụ na - ebu ọsịsọ agaghị adị ebe ahụ, ebe ọ nwere ike ịchọta ụzọ ya Nova 5 usoro ufọt ufọt nso mgbe a tọhapụrụ ya.
A na-ekwu nke a n'ihi na ụdị Huawei ụfọdụ, kwenyere na ha bụ ụdị Nova 5, anatala ya 3C asambodo na China. Edepụtara ụdị dị iche iche na nọmba ụdị 'SEA-TL10' na 'SEA-AL10'.
Ndepụta 3C nke China anaghị ekpughe ọtụtụ ihe, mana ihe kachasị mkpa anyị nwere ike inweta site na ya bụ ọnụnọ nke chaja 40 W n'ime igbe ikukuka. Chaja nwere otu nọmba Oghere Usoro ahụ dị ka nke a hụrụ na chaja ihe mgbochi nke Huawei P30 Pro.
Ọ bụ ezie na ọnụọgụ akara anaghị egosi aha Nova 5 nke ọma, mpụta nke ụdị Huawei na weebụsaịtị Eurasian Economic Commission nwere akara ngosi yiri 'SEA-LX1', edepụtara dị ka 'Huawei nova 5 ″, na-enye nkwenye na ịkọ nkọ na ọ bụ mobiles ndị a. Ọzọkwa, a ga-emelite usoro Nova n'afọ a ma anyị na-atụ anya nnwepụta ọhụụ n'oge na-adịghị anya.
Otu di na nwunye na-eche nche na nsụgharị nke Nova 5 abanyela na ntanetị n'oge na-adịbeghị anya, nke na-enye anyị echiche nke imewe. Nova 5 kụrụ EEC na Nova 5i, nke akpọrọ 'SEA-LX1U'.
Ngwaọrụ ahụ ga-enwe atụmatụ yiri ya Na-asọpụrụ 20 LiteMana agaghị enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'azụ. Kama nke ahụ, ọ ga-agụnye ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru-ngosi. Ya mere, ọ ga-adị elu karịa etiti etiti ụlọ ọrụ Huawei. Otú ọ dị, nke a ka ga-akwado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Nova 5 na-enweta asambodo 3C na ụgwọ ngwa ngwa 40-watt
Sony CEO kwuru na ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa ahụ